फापारेका पारखीहरू जात्रा-मेलामा फापारे गीताङ्गेलाई पच्छ्याइरहेका हुन्छन् । – Molamkhabar
२६ कार्तिक २०७७, बुधबार १३:४५
‘फापारे’ जात्रामा गाइने गीत हो- नेपाली दोहोरी गीत जस्तैजस्तै । यात्रा-विशेषमा दुईजना केटा र दुईजना केटीहरू फापारेको माध्यमबाट आ-आफ्ना मनको भावना साटासाट गर्दछन् । नेपाली दोहोरीमा माया-प्रितिको सन्दर्भ हुन्छ । फापारेमा पनि यसै भावको प्राथमिकता हुन्छ तर फापारे गीताङ्गेहरू आफ्ना सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेशका साथै आफ्ना जीवनका आरोह-अवरोह, भोगाइ र अनुभूतिहरू पनि व्यक्त गर्दछन् ।
फापारेमा सिङ्गो सामाजिक जीवनको दर्शन प्रतिबिम्बित हुन्छ । फापारे गीतमा युवायुवतीको मात्र चासो होइन, बुढापाकाहरू पनि उत्तीकै चाखले सुन्ने र गाउने गर्दछन् । गीत सुन्न सबै उमेर समूहकाहरू उपस्थिति हुन्छन् । गीतमा हाँसो, ख्यालठट्टा र व्यङ्ग्य आदि पनि बेजोडले मिसिने हुनाले स्रोताहरूको कान ठडिएको हुन्छ । बोर हुँदैनन् । अर्को, विवाहको अवसरमा बेहुला पक्ष र बेहुली पक्षका ताम्बा (समाजविज्ञ)हरू बिच पनि सामाजिक-सांस्कृतिक सन्दर्भमा दोहोरो चल्ने हुनाले फापारेलाई नेपालीकै शैलीमा दोहोरी भनी हाल्न उचित हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह हो । एउटै विधा हो भन्नेमा शंका छैन ।
विश्वमा आधुनिक कहलिएका सहरी जीवन शैली शुरु भएपछि गाउँले जीवनयापन र सिर्जनाहरू रूढीबुढी मानिए । यस युगका मानवशास्त्रीहरूले आदिवासीहरूलाई जङ्गली, असभ्य भनेर सम्बोधन गरे । यसै शैलीमा नेपाली भाषाका सर्जकहरू पनि यहाँका रैथानेहरूलाई ‘जङ्गली, स्वाँठे, खर्पने’ शब्दावलीले अपमानित गर्न थाले । यस्तै खाले शब्दकोशहरूको पनि विकास भयो । विविधतालाई लोप गराइयो । ‘एउटा’ र ‘एक मात्र’ भन्ने खालका नारा घन्कियो ।
दक्षिण एशियाका कुनै पनि विश्वविद्यालयमा लोकवार्ता (लोक जीवनयापन अध्ययन गर्ने शास्त्र) अध्ययन अध्यापनको विषय बनेन । नेपालमा एक दर्जन जति विश्वविद्यालय छन् र ती विश्वविद्यालयहरूमा न लोकवार्ता विभाग छ न त लोकवार्ता विषय नै पढाइछ । भारतमा लोकसाहित्य वा लोकवार्तालाई गवाँर (गाउँका, अनपढ, अबुझ, असभ्य, महत्त्वहिन, अर्थ न वर्थको) साहित्य भनेर हेपिन्थ्यो । यसैको प्रभाव नेपाली वौद्धिक जगतमा पनि परेको छ र यसको प्रतिछाँया तामाङ वौद्धिकतामा पनि देखिन्छ । सबैको उत्पादन स्थल एउटै हो- विश्वविद्यालय ।
केही वर्ष वा एक दसकदेखि ‘तामाङ डाजाङ’ नामक साहित्यिक संस्थाले तामाङ फापारे व्हाइ (गीत)मा चासो र चिन्ता देखाउँदै आएको छ र यस्तै तामाङ न्हाङखोर पनि यसतिर उन्मुख भएको छ । यी संस्थाहरू भच्र्युल कार्यक्रम मार्फत् फापारे गीतको खोज-अनुसन्धान, संरक्षण र संवर्धनका लागि तामाङ लगायतका विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छन् ।
वास्तवमा समसामयिक तामाङको जीवन दर्शन फापारेमा प्रतिविम्बित भइरहेको हुन्छ र यो तामाङ समाजलाई हेर्ने ऐना पनि बनेको छ । फापारे गीताङ्गेहरू मनले गाउँछन् । उनीहरूको अनुभूतिहरू दर्शक–श्रोताको मन छुन सफल हुन्छन् र कतिपय दर्शकहरू ‘ओन्छेन’ (विचरा) भन्दै यदाकता आँसु पुछेको पनि देख्न पाइन्छ । लेखेका गीतले मस्तिष्क छुन सक्ला तर सजिलै मन छुन सक्दैन् । फापारे व्हाइले मन छुन्छ, मस्तिष्क नछुन सक्छ ।
‘फापारे’ शव्दको व्युत्पत्ति ‘फाबा’ हुनसक्दछ जस्को अर्थ तिर्नु, फर्काउनु वा फिर्ता दिनु भन्ने हुन्छ । ‘रे’ तुकान्त हो । फापारे दुई पक्षबिच हुने कुराकानी वा संवादशैलीको गीत हो । सम्भवतः मानिसको आदिम पूर्खाले आमनेसामने कुराकानी गर्ने क्रममा नै गायन शैलीमा पनि अनुभूति व्यक्त गरे होलान् ।
अभिव्यक्ति शैली रमाइलो मन छुने भए पछि सरल आकृतिको बाजा (डम्फु)को आविष्कार गरे होलान् । अनि अन्य सीपयुक्त बाजाहरूको आविष्कार भए होलान् । फापारे जस्ता प्रत्यक्ष संवादशैलीका गीतबाट संवादविहिन साहित्य विधाहरू कविता, आख्यान, नाटकको उत्पत्ति भए होलान् भन्ने मलाई लाग्छ । प्राकृतिक विज्ञानले अमिबा जस्तो एक कोषीय जीवबाट बहुकोषीय जीवको उत्पत्ति भएको ठहर्याएको छ । सरलबाट नै जटिल वस्तुको अस्तित्व देखा पर्दछ ।
फापारे गीतको पहिलो कृति “तामाङ गीद” जंगवीर बोमजन र हर्क बहादुर पाखरिनले सन् १९६३ (२०२०) मा छपाएका थिए । ७२ पृष्ठको यस कृतिको पहिलो खण्डमा तामाङ भाषामा ६७ गीत छन् भने दोस्रो खण्डमा नेपाली भाषामा ७३ गीत छन् । यस गीतमा तामाङ जीवनयापन मात्र होइन तामाङ चिन्तन दर्शन पनि प्रतिविम्वित छन् ।
पुस्तक भारतको दार्जिलिङबाट छापिएको भए पनि यहाँ सैलुङ क्षेत्रको जीवन्त चित्रण छ । यसैगरी दोलखाका जंगवीर बोमजनले “तामाङ भाषाको गीत” मा तामाङ र नेपाली भाषामा ५९ गीत लेखेर दार्जिलिङको ‘विशाल गोर्खा प्रेस’बाट छापेका थिए । सम्भवतः यो पुस्तक “तामाङ गीद” भन्दा केही समय अगाडि छापिएको हुनसक्छ (र पछाडि पनि) । यी दुई पुस्तकले तामाङ गीतको प्रकाशनको श्रीगणेश गरेको प्रष्टै छ ।
अब निचोडतिर लागौं । फापारे तामाङ गीतको संसारमा अतिप्राचीन र मौलिक पनि भएकोले यसको संरक्षण, संवर्धन मात्र होइन युनेस्कोमा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीमा सूचीकृत गर्नतिर पनि हाम्रो प्रयास हुन आवश्यक छ । तामाङ पहिचान दिने मौलिक गीतको सन्दर्भमा होस् वा तामाङ लोकजीवनको प्रतिनिधित्व गर्ने सन्दर्भमा होस् वा लोपोन्मुख सम्पदाको अभिलेखन र संरक्षणको सन्दर्भमा होस् वा युनेस्कोको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदामा सूचीकृत गर्ने सन्दर्भमा होस् फापारे गीतलाई संरक्षण, संवर्धन र विकास गरिनुको विकल्प म देख्दिनँ । यसतर्फ तामाङ समुदाय, नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था युनेस्कोको गम्भिर ध्यान जान आवश्यक छ ।
हामीहरू सबै यसतर्फ उन्मुख हुनु पर्दछ । तामाङहरूकै पहल र सक्रियताबाट मात्र यो सम्भव हुन्छ । यसै क्रममा हामीले फापारे गीत गाइरहनेहरूलाई सम्मानका साथै कदर गरिनु पर्दछ र यथाशक्य प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ । अनि ‘ह्रामा’लगायतका धेरै गीतसङ्गीत जो छाँयामा परेका छन् ती सबैको खोज अनुसन्धान गरेर अभिलेखन गरिनु पर्दछ । यसै हप्ता हुन लागेको तीन दिने “तामाङ फापार गीत गायन र विचार–विमर्श कार्यक्रम” यसैतिरको यात्राको प्रारम्भ हो । सोचौं र सोच पलाओस् । धन्यवाद !
देउसी–भैलो नखेल्न सरकारको आग्रह…….
देउसी–भैलो नखेल्न सरकारको आग्रह.......